ဇန်နဝါရီ 26, 2021 - Austin Partners in Education
ဇန်နဝါရီလသည်အမျိုးသားဆရာလမ်းညွှန်လဖြစ်ပြီး၊ ဤလအတွင်း (နှင့်တစ်နှစ်လုံးလုံး!) ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆရာအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုကြသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကျောင်းစာသင်နှစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ပရိုဂရမ်းမင်းများနှင့်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအတွက်သင်ယူခြင်းနှင့်တိုးပွားလာသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ Austin ISD ကျောင်းသားများကိုအတူတကွထောက်ပံ့ရန်အခက်အခဲများကြားမှ ယခုနှစ်တွင်ကျောင်းသားများကိုလမ်းညွှန်သင်ကြားပေးနေသောလမ်းညွှန်ဆရာ ၂၀၀ ကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်လမ်းညွှန်နှစ် ဦး ဖြစ်သော Leeanne Pacatte နှင့် Derrick Townsend နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းနှင့်အဖြေများကိုစစ်ဆေးပါ။ သငျသညျရှိပြီးသားဆရာမဟုတ်လျှင်, သွားရောက်ကြည့်ရှု ကွမ်းခြံကုန်း ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ယနေ့ sign up ကိုရန်!
မေး။ ။ APIE ရဲ့ဆရာအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခြင်းကသင့်ဘဝအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော့်ဆရာကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးသင်ပေးတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကောင်းချီးတွေနဲ့အခွင့်ထူးတွေကိုပိုပြီးကျေးဇူးတင်လေးမြတ်စိတ်ရှိဖို့ကူညီပေးတယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးငယ်တဲ့၊ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆက်အသွယ်ရှိအောင်ကူညီပေးတယ်။ ငါ့သား၏မင်္ဂလာပွဲအတွက်မိခင် / သားအကနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးအချို့ကိုတင်ပြရန်လိုအပ်သည့်အခါသူမသည်နောက်ဆုံးပေါ်အကများကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ mentee ငါ့ကိုပုံမှန်အတိုင်းကမ္ဘာအပြင်ဘက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအသိပေးသည်။ ငါအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မည်
မေး - လူတစ်ယောက် မှနေ၍ virtual လမ်းညွှန်သင်ကြားမှုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင့်အားလမ်းညွှန်တစ်ခုအနေဖြင့်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုသင်ထင်ပါသလဲ။
A: အရင်ကသူမကိုအထက်တန်းကျောင်းမှာတွေ့ဖူးပြီးနေ့လည်စာအတူတူစားရတယ်။ ဒါကြောင့်မတူပဲ, ဒါပေမယ့်ငါတို့ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ မကြာသေးမီကစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတာကိုခံစားနေရသောသင်၏ mentee နှင့်သင်တွေ့ဖူးသောရယ်စရာကောင်းသော၊ အားတက်ဖွယ်ကောင်းသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်မရဲ့ mentee တတိယတန်းမှာစတက်ခဲ့တယ်။ တစ်ခါတလေသူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်သူမနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာတွေ့တယ်။ သူမသည်ပထမတော့ရှက်တယ်။ ကျနော်တို့အလွန်ရီစရာဖြစ်ခြင်းအလွန်ပျော်စရာရှိသည်လိမ့်မယ်။ သူမသည်နောက်တဖန်ရီစရာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပေးတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နှုတ်ခမ်းမွှေးများကိုဝတ်ဆင်သည့်အထူးပျော်စရာကောင်းသောနေ့ကိုအမှတ်ရမိသည်။ အလယ်တန်းကျောင်းမှာတော့သူမတီးဝိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့က Duet ကစားနိုင်အောင် Clarinet ငှားလိုက်တယ်။ ငါကစားခဲ့ပြီးကတည်းက 45 နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အရူးဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည် အရူးပျော်စရာ! သူမသည်ယခုနှစ်အထက်တန်းကျောင်းအောင်ပြီးမကြာမီနောက်ဆုံး Varsity ဂိမ်းကိုကစားတော့မည်ဖြစ်သည်။ ငါသူမ၏မိဘများနှင့်အတူတက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာငါ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထိုမိုက်မဲသောမိန်းကလေးသည်ဂရုစိုက်တတ်သော၊ စဉ်းစားပြီးစေ့စပ်ထားသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံသား (နှင့်အံ့သြဖွယ်အားကစားသမားတစ်ယောက်) ဖြစ်လာသည်။ သူမရွေးချယ်သောစားပွဲသို့သူမအံ့သြလောက်အောင်လက်ဆောင်များပေးသည် ကျွန်တော့် mentee ကကျွန်တော့်အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုလက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲ။ သူမဂုဏ်ယူ ၀ င့်ကြွားတာကိုဂုဏ်ယူလို့မရပါဘူး။ (သူမသည်သူမအထက်တန်းကျောင်းအောင်ပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်သူမငါ့ကိုဖယ်ရှားပစ်မည်ဟုမထင်ပါ!)
ကျွန်တော့်ဘဝမှာဖခင်တစ်ယောက်မပါဘဲကြီးပြင်းလာခြင်းဟာသူ့အတွက်စိန်ခေါ်ချက်တွေပဲ။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောလူသားတစ် ဦး ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော့်မှာကိုယ်ပိုင်ကလေးတွေရှိခဲ့ရင်သူတို့အတွက်အဲဒီမှာရှိနေဖို့ကျွန်မသေချာခဲ့တယ်။ သူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုငါမမှတ်မိတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာအဲဒီအထောက်အပံ့မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မအဲဒီမှာရှိနေရတာကိုပဲခံစားခဲ့ရတယ်။ သူတို့ထံမှကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောကျေးဇူးတင်မှုကကျွန်ုပ်ဘဝကို ပို၍ ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းသို့မဟုတ်အားကစားပွဲများကိုသွားရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သည်, ထိုအရပ်၌မိဘများကသူတို့အဘို့အတက်မပြခဲ့ကြသောကလေးများအချို့ရှိလိမ့်မည်။ ဒါကကျွန်မရဲ့နှလုံးကိုထိမိခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၅ နှစ်ကျော်သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောသင်ကြားသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမူလတန်းကျောင်းကနေကောလိပ်မှတဆင့်ကျောင်းသားများကိုလမ်းညွှန်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးအုပ်စုသည်အလယ်တန်းကျောင်းသားများဖြစ်သည်။ ဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုကိုလမ်းညွှန်ရာတွင်ငါသင်ကြားပေးသောကျောင်းသားများအပေါ်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်ဤအသက်အရွယ်ကျောင်းသားအုပ်စုသည်မူလတန်းကျောင်းပတ် ၀ န်းကျင်မှထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးယခုသူတို့၏ဆယ်နှစ်တာကာလကိုစတင်နေကြသည်။ ဤနှစ်အလယ်တန်းကျောင်းသည်သူတို့ကိုအထက်တန်းကျောင်းသို့ပို့ဆောင်သောဘ ၀ အတွက်ပိုမိုပြင်ဆင်သည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာကျောင်းသားများနှင့်အတူလုပ်သောနှောင်ကြိုး။ ငါသူတို့ဘဝမှာထူးခြားမှုတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရာတွင်ကျွန်ုပ်မျှဝေသောအရာတစ်ခုသည်သူတို့၏အနာဂတ်ကိုအပြုသဘောဆောင်သောနည်းလမ်းဖြင့်တိုးတက်စေရန်သူတို့၏ဘဝများကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်ကျောင်းသို့ရောက်သောအခါကျောင်းသားများနှင့်ရုံး ၀ န်ထမ်းများထံမှကျွန်ုပ်လက်ခံသော reception ည့်ခံခြင်းကြောင့်လည်းကျွန်ုပ်သည်လမ်းညွှန်သင်ကြားခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ ပျော်ရွှင်သည်။ ငါဟာလူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နေသလိုပဲ။ ထို့အပြင်ကျောင်းသားကိုသိရန်အပတ်တိုင်းသူတို့နှင့်သူတို့လာလည်ရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေသည်။ ဒါကကျွန်မအတွက်တကယ်ကျေနပ်စရာကောင်းပြီးကျောင်းသားကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါ့ mentee သူတို့၌ငါ၌မိတျဆှေရှိကွောငျးကိုငါသိ၏။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုရင်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကျောင်းသားများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားများနှင့်လည်းမျှော်လင့်ပါသည်။ သူတို့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့သူတို့အနာဂတ်ဟာငါ့အတွက်အရေးကြီးတယ်။
မေး - လူတစ်ယောက် မှနေ၍ virtual လမ်းညွှန်သင်ကြားမှုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင့်အားလမ်းညွှန်သူအဖြစ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။
ငါနီးပါးငါ့ mentee နှင့်တွေ့ဆုံရန်ရတခါအကူးအပြောင်းကစိန်ခေါ်မှုများရှိလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျတို့သေချာဘို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် mentee ဟာအားကစားကိုနှစ်သက်တဲ့အလွန်အေးမြတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။ ဘေ့စ်ဘောအဓိကအားဖြင့်သူသည်ဂိမ်းကိုနှစ်သက်သည်။ ငါသူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအားကစားရုံမှာအပြင်အပြင်ဘောလုံးကိုဘောလုံးကန်ခြင်း၊ လူတစ် ဦး အတွက်လမ်းညွှန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလွဲချော်ပါလိမ့်မည်။
ဤတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုမူလဒီဇိုင်း၏ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလထုတ် The Mentor Connection ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိလမ်းညွှန်သူများအတွက် APIE ၏သတင်းလွှာဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စကို Gabriel Casanova တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။